Latest EPRP News!
8. NCA လက်မှတ်ထိုး တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ခြောက်ဖွဲ့ ပေါင်း၍ စီးပွားရေးကုမ္ပဏီ ထောင်မည်	-EPRP
#အထူးသတင်း ကဏ္ဍ	(21h ago)
တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘော တူစာချုပ်(NCA)လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် တိုင်းရင်း သားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ခြောက်ဖွဲ့ပေါင်းပြီး စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီ ထူထောင်မည်ဟု ယင်းအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များ က ပြောသည်။ အကြောင်းအရာအပြည့်အစုံဖတ်ရန်
7. ၂၁ ရာစုပင်လုံ တတိယအစည်းအဝေးအပေါ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ လေ့လာကြည့်ခြင်း	-EPRP
#အထင်အမြင်	(21h ago)
၀၁၈ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၁၁)ရက်နေ့မှ (၁၆)ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သော ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ ၂၁ရာစုပင်လုံ၏ တတိယအစည်းအဝေးအပြီးတွင် စီစစ်ဝေဖန်သုံးသပ်ထောက်ပြသံများ သောသောညံခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံရေးသုတေသီများ၊ အသိ ပညာရှင်များ၊ စာရေးဆရာကြီးများနှင့် လူမှုမီဒီယာ အသီးသီးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချသံ၊ ချီးမွမ်းထောပနာပြုသံတို့ဖြင့် ဘက်ပေါင်းစုံ၊ ရှုထောင့်မျိုးစုံမှ ရေးသားဝေဖန်သုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။အကြောင်းအရာအပြည့်အစုံဖတ်ရန်
6. Hard Drive, USB Flash Drive & SD Card ထဲမှ Format, Delete လုပ်မိပါက data များပြန်လည်ရယူနည်း	-EPRP
#EPRP အဓိကဖော်ပြသောအရာများ	(2d ago)
Hard Drive, USB Flash Drive & SD Card ထဲမှ Format, Delete လုပ်မိပါက data များပြန်လည်ရယူနည်းကို အီးပီအာပီကထုတ်လုပ်ဖော်ပြထားပါသည်။ [4:19], နေ့စွဲ ။ ။ ၂၀၁၈ ဇွန်လတွင် လွှင့်တင်သည်။ မြန်မာဘာသာဖြင့်ဖော်ပြပြီး အသံဖိုင်မပါဝင်ပါ။
5. မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် Facebook Page တစ်ခုပြုလုပ်နည်း (Android ဖုန်း အသုံးပြုသူများအတွက် အခြေခံအဆင့်)	-EPRP
မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် Facebook Page တစ်ခုပြုလုပ်နည်းနှင့် Facebook Page အခြေခံအကြောင်း ကို အီးပီအာပီကထုတ်လုပ်ဖော်ပြထားပါသည်။ [3:45], နေ့စွဲ ။ ။ ၂၀၁၈ မေလတွင် လွှင့်တင်သည်။ မြန်မာဘာသာဖြင့်ဖော်ပြပြီး အသံဖိုင်မပါဝင်ပါ။
4. EPRP ကရင် ရေဒီယုို အစီအစဉ် (၈၄)	-EPRP
#EPRP ရေဒီယို (ကရင်)	(6d ago)
သြဂုတ်လ ဒုတိယအပါတ် ၁၀.၀၈.၂၀၁၈ တွင်ထုတ်လွှင့်သည်။ ကြာချိန်(၁၅)မိနစ် ဒီတစ်ပါတ် နားဆင်ရမှာကတော့ သတင်း(၁) – RCSS/SSAက ဖမ်းဆီးခဲ့သူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့ လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ပြောတဲ့သတင်း သတင်း(၂) – ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းယခုနှစ် ကရင်တိုင်းရင်းသားစာပေသင်ကြားသူ တစ်သိန်းကျော်ရှိတဲ့ သတင်း သတင်း(၃) – ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ ရှင်းလင်းပွဲ လားဟူအဖွဲ့ ပြုလုပ်တဲ့သတင်း သတင်း(၄) – ချင်းတွင်းမြစ်ရေ၀င်ရောက်၍ အိမ်ထောင်စု ၆၀ကျော် ပြောင်းရွှေ့ရတဲ့သတင်း မေးမြန်းချက် – ရေတွေကြီးခြင်းကြောင့်အလုပ်အကိုင်၊စားဝတ်နေရေးအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အပေါ် မှော်ဘီမြို့နယ၊် မြို့မတိုးချဲ့အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်မှာ နေထိုင်တဲ့စောခူဆဲရဲ့ ပြောပြချက်တွေကို နားဆင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်ချက်။ ။မြန်မာလိုပြောပါသည်။ ကောက်နှုတ်ချက် – မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို [...]
3. EPRP ရှမ်း ရေဒီယုို အစီအစဉ် (၅၉)	-EPRP
#ရှမ်းဘာသာဖြင့်ရေဒီယို	(6d ago)
သြဂုတ်လ ဒုတိယအပါတ် ၁၀.၈.၂၀၁၈ နေ့တွင်ထုတ်လွှင့်သည်။ ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် News (1) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေသည့် နမ္မတူမြစ်(သို့) မြစ်ငယ်မြစ်ပေါ် ရေကာတာများဆောက်လုပ်ခြင်းမှ ရပ်တန့်ရန် သျှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သီပေါမြို့နယ်မှ လူမှုအသင်းအဖွဲ့များနှင့် ရပ်ရွာပြည်သူများက ကန့်ကွက်သည့် သတင်း News (2) အစိုးရတပ်မတော်၏ စစ်ကြောင်းများ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသော သျှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ် ပန်လော့အုပ်စု ဒေသခံ (၁၆) ဦးအား ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် ကျားခေါင်းပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှ သွားရောက်ပြီး အာမခံမှုဖြင့်ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တဲ့သတင်း News (3) သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲခရိုင် နမ္မတူမြို့နယ်အတွင်း စစ်ရေးပဋိပက္ခကြောင့် ဒေသခံ (၁၀၀) ကျော် သီပေါမြို့သို့ စစ်ဘေးရှောင်နေကြရသည့်သတင်း News (4) လက်ရှိရေးဆွဲနေတဲ့ မြေယာဥပဒေတွေအစား အမျိုးသားမြေယာ [...]
2. မွန်ပါတီ သုံးခု ပူးပေါင်းရန် သဘောတူပြီ	-EPRP
#အထူးသတင်း ကဏ္ဍ	(6d ago)
ပေါင်းစည်းပြီးဖြစ်သည့် မွန်ပါတီ နှစ်ပါတီနှင့် အသစ်ဖွဲ့စည်းထားသော မွန်အမျိုးသား ကိုယ်စားပြုပါတီတို့ ပေါင်းစည်းရန် သြဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့က သဘောတူညီလိုက်သည်ဟု နှစ်ဖက်ကိုယ်စားလှယ်များက ပြောသည်။ အကြောင်းအရာအပြည့်အစုံဖတ်ရန်
1. RCSS/SSA က ဖမ်းဆီးခဲ့သူတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်ပြော	-EPRP
ရှမ်းပြည်နယ်၊ ရပ်စောက်မြို့နယ် ကျိုင်းခမ်းဒေသမှာ နှစ်ရှည်သစ်ပင် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီ ၄ ခုက အလုပ်သမား ၁၂ ဦးကို ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ/ရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS/SSA က ၈ နှစ်နီးပါးကြာ ဖမ်းဆီးထားခဲ့တာကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်က တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာအပြည့်အစုံဖတ်ရန်